ဟာဖွဇ်မနန်းကျောင်းမှကျောင်းသားတစ်ဦး ဒါးတင်၍ ဆွဲလှီးလိုက်သော ဓါတ်ပုံ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဟာဖွဇ်မနန်းကျောင်းမှကျောင်းသားတစ်ဦး ဒါးတင်၍ ဆွဲလှီးလိုက်သော ဓါတ်ပုံ
အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
(တောင်ကြီး-မိတ္ထီလာ – ရန်ကုန် လမ်းခွဲအဆုံဘေး) ပွိုင့်ဘီယာဆိုင်ဘေးတွင် နေထိုင်သူ နဂါး ဦးဆောင်သော လူတစ်စုသည် ခရိုင်ကွင်းဘက်မှ ထွက်ပြေးလာသော လူများကို ဒါးနှင့် လိုက်ခုတ်၍ ရွှေမြင်တင်ဘုရား(ရန်ကုန်လမ်းဘက်သို့) ဘက်သို့ ပြေးတက်လာသောသူများနှင့် ကားပေါ်မှ ချထားသော သူများကို နဂါးဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ လိုက်လံ ဒါးနှင့်ခုတ်၍ အချို့ မှာ သစ်ခွဲစက် (မူလတန်းကျောင်းဝန်း)ဘက်နှင့် မိတ္ထီလာရေကန်အတွင်းထိ ဆင်းပြေးကြပါသည်။ ကန်ထဲ ဆင်းပြေး သူများကို နဂါးမှ ဘာမှမလုပ်ဘူးဟု ချော့ခေါ်ကာ ကုန်းပေါ်ရောက်သော အခါ တွင် တစ်ဦး ကိုလည်ပင်းပေါ် ဒါးတင်၍ ဆွဲလှီးလိုက်ပါ သည်။(ခုတ်သတ်ခြင်း မဟုတ်ပါ)။ ၎င်း ကလေးသည် ဟာဖွဇ်မနန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ် ပါသည်။
By: မိတ္ထီလာမွတ်စ်လင်မ်ဒုက္ခသည်များအား မီဒီယာကဏ္ဍဖြင့်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရေးအသင်း
This entry was posted on April 6, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Photo News: မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာသွေးရိုးသားရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတ်၊အစိုးရမှဖော်ထုတ်ပေးရန် PCN အဖွဲ့မှ(၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းကြည်မှ မီဒီယာများသို့ ပြော .. ..	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူး၏စကားကို လိုသလို ဆွဲယူ၍ သတင်းဖော်ပြသော မီဒီယာများ သိစေရန် (မေး၊ဖြေ) … →